Android 4.2.2 yekuvandudza ye & t & apos; s htc imwe x yave kusundidzirwa kunze
Kuru Nhau & Ongororo Android 4.2.2 yekuvandudza yeAT & T & apos; s HTC One X parizvino yave kusundidzirwa kunze
Pakutanga neChitatu, takakuudza izvozvo HTC yakanonoka iyo Android 4.4 kugadzirisa yeiyo US vhezheni yeHTC One kwevhiki imwe chete kana mbiri. Kune rimwe divi, iyo Taiwan inogadzira inogadzira yakanga yavimbisa tanga kuburitsa kunze Android 4.2.2 yeiyo AT & T yakanzi HTC One X nhasi. Ko HTC yakaita sezvaingati yaizoita here, kana kuti HTC inoreva 'Pano & apos; s kuConstant disappointment'?
Nhau dzakanaka ndedzekuti kana zvasvika kune iyo yekugadzirisirwa yakarongerwa nhasi, HTC yakauya sezvakavimbiswa uye yatanga kutumira iyo OTA yekuvandudza iyo inounza zvese zviri zviviri Android 4.2.2 uye Sense 5 kuchinhu. Iyo yekupedzisira inosanganisira BlinkFeed, iyo inounza iwe nhau dzako uye zvemagariro midhiya feeds. Zvakare zvinosanganisirwa ndeye yakagadziridzwa Garari app, Vhidhiyo Yakakoshesa, Music Channel uye Miracast.
Iyo yekuvandudza zvakare ichagadzirisa matambudziko nebhuku rekero reAT & T, uye matambudziko neNFC. Kudhanilodha kunotora maminetsi makumi maviri kuti upedze neimwe maminetsi gumi anodiwa kuti uiise, uye unofanirwa kuita kuti bhatiri rako ribhadharwe kanokwana kuita 35% izere. Iyo software vhezheni yauri kuisa ndeye 2.15.502.1. Unogona kuedza kuiburitsa kunze kwefoni yako nemaoko nekuenda kuneese maApp, Zvirongwa> AT & T Software Zvidzoreso> Tarisa kuti uvandudze> Ok.
Sezvatakataura rimwe zuva, iyo yekuvandudza ichaenda pane yakadzadzarika zvinoreva kuti havazi vese vanozoigamuchira panguva imwe chete. Kana iwe usingaigamuchire nhasi, pamwe ichauya mangwana.
AT & T HTC One X inovandudzwa ku Android 4.2.2 uye Sense 5
mabviro: HTC kuburikidza AndroidCentral
apple tarisa 6 gps vs cellular
fake micro sd kadhi bvunzo
Yakanakisa Samsung Galaxy S6 makesi uye anovharira ese ese chiitiko
iOS 13.5 hutano hunogona kuve mutsauko pakati pehupenyu nerufu
Sony yakazivisa mitengo yeUS uye mazuva ekuburitsa yeXperia XZ Premium, Kubata, uye XA1 Ultra